777-200ER FMC UPDATE Todobaad 4 10 hours ago #1856
Ka dib markii aan ku wareejiyay qaybta faallooyinka ee soo degsiga, waxaan helay xal. Waxaad u baahan tahay inaad tafatirto faylka 777fmc.dll ee la socda soo-dejinta. Xalka waxaa lagu soo guurinayaa / lagu dhejiyay hoosta. Dhammaan amaahdu waxay ku socotaa Ariel Terkeltoub. Waxaan isku dayay in aan hirgaliyo hagaajintan, laakiin markaan furo feylka anigoo adeegsanaya Notepad, waxay noqoneysaa mid aan la aqrin karin Waxaan isticmaalaa Windows 10. Xal ma u yahay dhibaatadayda? Mahadsanid!
Dhamaantiin ee ku dhibaateysan FMC ama VC guud ahaan, ku dar sadarrada soo socda isla markiiba kahor sumadda </SimBase.Document>
<Name> JB777 Loading </Name>
<Disabled> Been </Disabled>
<Path> Mooduladaha \_ jb777loader.dll </Path>
<Path> Mooduladaha \_ jb777_fmc.dll </Path>
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Musicyedin1, dyttffrr44
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 6 #1862
Dhibaatooyin baan ka haystaa helista xalka faylka .dll.
Waxaan u isticmaalaa desktop desktop 64bit oo leh Windows 10.
Ma ii tilmaami kartaa jihada saxda ah fadlan?
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 5 #1863
Waxaan u maleynayaa, inaad ku taqliqeeyso xariiqyadaan faylka 'dll.xml' ee aadan tafatirin 777fmc.dll.
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 5 #1864
C: / Users / "UseName" / AppData / Reoming / Microsoft /FSX
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 5 #1865
Waxaad u baahan tahay inaad ku darto khadadka kore faylka DLL.xml ee ku jira:
C: \_ Users \_ YOUUSERNAME \_ AppData \_ Roaming \_ Microsoft \_FSX
Fur faylka DLL.xml oo ay ku jirto warqad notepad kuna dar xogta waana inay shaqaysaa!
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 5 #1866
Waan hubiyay waddadan, laakiin ma lihi fayl summadaysan "AppData". Dhibaatadaani miyaa? Hadday sidaas tahay, sidee baan u hagaajin karaa? Waan fahamsanahay hadaadan aqoon sida.
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 5 #1867
Weligaa ha ilaalin, waxaan helay xalka aniga oo ku qoraya jidka dhabta ah halkii aan tagi lahaa inkasta oo galka galka galka la galiyo.
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 5 #1868
Waxaan isku dayay inaan hirgaliyo koodhkan cusub, laakiin waxba kama taro. Sababta oo ah nooca faylka, iyo in aanan aqoon u lahayn sida loo tafatiro feylasha, uma abuurin gurmad. Waxay ila tahay inay qasab tahay inaan rakibo oo xirmo xirmo ku xirno. MAR KHUDBADDA KU SOO DHAWAADA !!!!!!
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 4 #1869
Cafis in la dhibo, laakiin waa macquul in lala wadaago 'nuqul' dhabta ah ee waxa aad. galka 'Dll folder' ee ku jira diyaaradda gaar ah?
Waa inay ku caawisaa kala soocidda tan.
Waxaan ogaaday in kabadan hal feyl, sidaa darteed codsi.
Waxaan isku dayi doonaa oo kuu soo diri doonaa shaashadda (wixii aan hore u lahaa, iyo wixii intaa ka dambeeya).
777-200ER FMC UPDATE todobaad 3 maalmood ka hor 3 #1871
Shaashadda shaashadda waxay muujisay faylalka ugu waaweyn, iyo midka gaarka ah.
Ma arki kartaa inay jiraan saddex (3) ikhtiyaar ee shaashadda ugu horreysa? : dll, dll.xml iyo DLL_XML
Midkasta runtii wuxuu lahaa soo galo, laakiin waxaan qaatay oo keliya shaashadda DLL_XML.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.369